Kadib KSI ka dhanka ah Logan Paul 2, waa kuwee ciyaartoyda kubada cagta ee kula dagaallamaya giraanta? - KU SAMEEYSAA NABADA
ACCUEIL » SPORTS Ka dib KSI iyo Logan Paul 2 ka dib, waa kuwee ciyaartoyda kubada cagta inay la dagaallamaan giraanta?
YouTubers KSI iyo Logan Paul ayaa ku tartamay giraanti markii labaad si aad u aragto cidda ku guuleysan doonta isbuucaan.
Tag: Estudiantes de La Plata ayaa shaaca ka qaaday libaax dabeed
Daily Poke Daily ayaa maalin walba halkan joogta si ay kuugu sheegto sheekooyinka ugu xun, uguna cajiibsan uguna badan ee muuqaal ah.
2 Ku saabsan
KSI ayaa ugu dambeyntii u soo baxday guuleyste kadib lix wareeg oo ka dhacay magaalada Los Angeles, iyada oo garaacday bahda warbaahinta bulshada iyada oo loo marayo go'aan kala go 'kadib markii Paul loo tirtiray tallaabo sharci darro ah.
Laakiin iyada oo maskaxda lagu hayo, waxaan isweydiinay maxay tahay fekerka fekerka fekerka fekerka ee aan inta badan jeclaanno inta u dhaxaysa laba ciyaartoy? Tani waxay noqon kartaa mid aad u xiiso u leh qofkasta marka laga reebo shirkadaha caymiska.
Ronaldo ayaa jooga kooxda Juventus, laakiin adduunku wali waa uu quus ka taagan yahay inuu dejiyo, mar iyo dhammaan, maanta. Ayaa ah ciyaartoyga ugu weyn taariikhda casriga.
Dabcan waxaa jiri doona shuruud (sida ugu badan uu ku daray Ronaldo): ma jiro taabashada wajiga ama timaha.
Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo waxay wadaageen xafiiltan kaas oo go’aan laga gaari karo giraanta. Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images
Labo ka mid ah difaacyada ugu anshax xumo ee taariikhda Real Madrid ayaa ku tartameysa hanashada magaca 'badboy' Whit . Inaad garaacdo, garaacdo, garaacdo ama garaacaan suunka hoostiisa - waxaad ku dhawaad ​​dammaanad qaadi kartaa wax walba.
Pepe wuxuu ka hortagayaa Sergio Ramos waa inaan la hor istaagin. MICHAEL CAMPANELLA / Getty Images
Sida ay caddeynayaan muuqaal dhawaan laga soo duubay muuqaalka 'CCTV' oo ah halka daafaca dambeedka midig ee Arsenal iyo saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ee Mesut Ozil la dhacay, reer Bosnia wuxuu leeyahay geesinimo uu ku qaado wax walba.
Muuqaal cusub oo laga soo duubay fiidiyowga fiidiyowga ayaa muujinaya Sead Kolašinac oo taagan inkastoo uu ku hub qaatay hub intii lagu jiray isku daygii dhacii Luulyo. pic.twitter.com/XGuROytBt4
- ESPN FC (@ESPNFC) 6 November 2019
In la yiraahdo dhibta dhiiga ee u dhexeysa labada waa arin aan laga fiirsan. Haddii aadan horey u aqoon, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad aqriso .
Marka la soo koobo, waxay leeyihiin dhibaatooyin tan iyo markii Icardi uu guursaday xaaskiisii ​​hore ee Lopez, Wanda Nara, oo loo galay 2013, bilo uun ka dib furitaankiisii. isaga.
Labada weeraryahan ee reer Argentina Maxi Lopez iyo Mauro Icardi ayaa sannado badan is khilaafayay. Villa Claudio - Sawirada Inter / Getty
Zlatan, oo suunka madow ku leh taekwondo, ayaa lagu dhaawacay feeraha jabay intii lagu jiray dagaal adag oo dhulka ah "The Gooch" waqtiga AC Milan.
Haddii Onyewu uusan diyaar aheyn, markaa waxaan hubnaa in Nedum Onuoha, oo ka tirsan Real Salt Lake, uu jeclaan lahaa inuu weerar ku qaado Swede ka dib iyagoo ugu yeeray "tuug" bishii Abriil.
Nedum Onuoha iyo Zlatan ayaa wajahday horraantii xilli ciyaareedkaan. Sawirro Katharine Lotze / Getty Images
Aargudasho kale oo da 'ah. Soo bandhigista xeerarka MMA ayaa kaliya u anfacaya ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Holland De Jong, kaasoo si aan caadi aheyn u garaacay xiddiga reer Spain Alonso kulankii finalka Koobka Adduunka ee 2010.
#OnThisDay gudaha 2010, Nigel de Jong wuxuu isku dayay inuu soo afjaro Xabi Alonso 🥋 pic.twitter.com/W41b1mlq6G
- Caynaba Kubadda Cagta (@FB_WHISPERS) 11 July 2019
Waxaan hubnaa in Xabi jeclaan lahaa inuu helo fursad lacag lagu helo laakiin waxaan haysan karnaa labo kooxood oo kaliya si aan ula dagaallano qaabka Royal Rumble ka dib kaararka huruudda ee 13 ee ciyaartaan ku dhawaad ​​toban sano ka hor.
Dabcan, waxaan wali ku dhex biiri karnaa Portugal dib-u-dhiska "Dagaalkii Nuremberg" ee Nederland laga bilaabo 2006, markii garsooraha reer Russia Valentin Ivanov uu daabacay rikoor Koob Adduun oo wata afar kaar oo cas iyo 16 ah. kaararka jaalaha ah.
Estudiantes wuxuu daaha ka qaadaa libaax dabeed
Hologram-ka kooxda reer Argentina ee Estudiantes ee ka socda La Plata si loogu dabaaldego ku soo laabashadiisii ​​Jorge Luis Hirschi Stadium ayaa qaadan doonta waxyar garaacis. Oo waa inaad rumaysaa.
Mudaaharaad yaab leh oo Estudiantes de La Plata ku soo laabashadooda garoonkooda kadib sannadihii 13
(via @SC_ESPN ) pic.twitter.com/yPkcoPd9we
- ESPN FC (@ESPNFC) 10 November 2019
Qof baa laga yaabaa inuu doonayo inuu khad ka galo Chelsea una ogeysiiyo in libaaxa dabka weyn uu yahay habka lagu raaco dhammaan dhacdooyinka la xiriira mustaqbalka, marka loo fiiriyo sumadooda.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/blog-the-toe-poke/story/3986324/ronaldo-vs-messi-after-ksi-vs-logan-paul-2-which-footballers-should-right-in-the-ring